Iindaba -Ihlabathi jikelele ioksijini yokugxila kubungakanani bemakethi ukungqina ukukhula okungathandekiyo ngaphezulu kwe-2018-2026
ISelbyville, eDelaware, ngoMeyi 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) - Ngokweengcali ezichaziweyo, intengiso yeoksijini yelizwe jikelele kulindeleke ukuba ibonakalise ukukhula okukhawulezileyo kule nto izayo, ngaloo ndlela ifumana ingeniso enkulu ngonyaka wama-2026. izifo zokuphefumla.
Ngaphaya koko, ingxelo iphonononga le ndawo yentengiso ngokubhekisele kumhlaba wetekhnoloji, imveliso, kunye nomsebenzisi wokugqibela, kungoko inika iinkcukacha malunga nesabelo seshishini esigcinwe licandelo ngalinye kunye nokuchonga iindawo ezinenzuzo kutyalo-mali lwexesha elizayo. Ngaphaya koko, isishwankathelo esineenkcukacha seemarike zengingqi sicacisiwe kolu xwebhu, ecaleni kwembonakalo yokhuphiswano egxininisa kwizinto ezibalulekileyo ezinje ngemveliso yenkampani, imali yabo, ukusebenzisana kwabo, ukufunyanwa kwabo, kunye nomzi mveliso.
Kwirekhodi, kugcinwa ioksijini ezijolise ekuboneleleni nge-oksijini eyityetyisiweyo ngokususa initrogen kumthombo womthombo (ubukhulu becala umoya ojikelezayo) kunye nokwandisa uxinzelelo lweoksijini. Zisetyenziswa ngokubanzi ukubonelela ngeoksijini yezonyango kwizigulana ezinamazinga eoksijini egazi asezantsi.
Ukunyuka kwenani labemi abaqheleneyo neemeko zempilo ezigwenxa, kunye nokuxhaphaka kokutshaya icuba phakathi kwabantu kuya kukonyusa ibango le-oxygen concentrators. Ngaphaya koko, ukuthanda isigulana kunyango lwe-oksijini esekwe ekhaya, ngokubambisana nenkqubela phambili yetekhnoloji ebaleni ikulungele ukongeza imbonakalo yomzi mveliso weoksijini wehlabathi.
Kwicala elisezantsi, ioksijitha yeoksijini iyathandeka, ibenza ukuba bangafikeleleki kubemi abakumgangatho ophakathi, abathi kunye nemeko engqongqo yolawulo kwinkalo yezempilo ethe nkqo iya kuchaphazela ukukhula kweemarike ngokubanzi.
Ukubhalisa iziqendu zentengiso:
Ngokusekwe kumhlaba wetekhnoloji, imakethi ihlelwa ukuba ibe kukuhamba okungapheliyo, kunye nedosi yokubetha. Iindidi ezahlukeneyo zezingxowankulu zeoksijini ezikhoyo kumzi mveliso ziyaphatheka, kwaye zilungisiwe. Ngelixa, ingeniso eyahlukileyo yomsebenzisi evelisa ingeniso yonakekelo lwasekhaya, izibhedlele kunye nabanye.
Ingxelo igubungela nzulu kwimimandla yengingqi kunye namandla okuqikelela ukuqikelelwa kwamaxabiso e-oksijini ye-oxygen concentrators kwihlabathi liphela ngo-2018-2026. Iindawo ezahlukileyo ezihlalutyiweyo yiJapan, i-United States, ne-EU5 (i-United Kingdom, iSpain, i-Itali, iFrance ne-Jamani).
Inqanaba leshishini libonisa ukhuphiswano olunzulu. Amafemu azinzileyo atyala imali rhoqo kwi-R & D ukwahlula imveliso yawo kunye nokwandisa amandla emveliso. Izicwangciso-qhinga ezinjengokusebenzisana kunye nobambiswano, ukufunyanwa kunye nokudityaniswa, kunye nenkxaso-mali ziyabandakanywa ziinkampani ukugcina indawo yazo kwintengiso kunye nokuphindaphinda ingeniso yabo.
Ixesha Post: May-21-2021